Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed oo bilaabay inay ka howlgalaan G/Galguduud – idalenews.com
Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed ayaa bilaabay in ay ka howlgalaan degmooyin ka tirsan gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya.
Col. Faarax Warsame Golongoole oo kamid ah saraakiisha ciidamada Booliska gobolka Galguduud oo Degmada Cabudwaaq kula hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ciidamada Booliska ee ka Howlgala degmooyin katirsan gobolkaasi ay bilaabeen howlgalo lagu xaqiijinayo amaanka iyo sidii Boorka looga jafilahaa howlaha uu ciidanka Boolisku ugu xilsaaranayahay Qaranka.
Taliyaha ayaa sheegay in ciidanka Boolisku ay si toos ah uga howlgalaan xiligan saldhigyada Booliska Degmooyinka Balanbal iyo Caabudwaaq waxa uuna xusay in ciidamadan oo kamid ahaa Boliiskii sanado Kahor lagu soo tababaray xerada Carmo ay diyaar uyihiin sidii maamulka dowlada loogu balaarinlahaa Gobolada iyo degmooyinka dalka gaar ahaan gobolka Galguduud oo ay qeybo kamid ah gacanta Kuhayaan maamulka Ahlusuna Waljameeca.
Col.Faarax Warsame Golongoole ayaa dhinaca kale tilmaamay in xiligan uu burbur xoogan ka muuqdo Saldhiga Booliska degmada Balanbal kaasoo uu tilmaamay ineysan suurtagal u aheyn in howshii boliiska Ee aheyd badbaadinta muwaadinka iyo hantidiisa eysan ka hirgaleyn isagoo codsaday in dayactir lagu Sameeyo ayna helaan ciidamadu Gaadiid ay ku shaqeeyaan.
Ciidamada qaranka qeybahooda kala duwan ayaa sanadihii u danbeeyay waday isku balaarinta gobolada Iyo degmooyinka dalka maadama ay dowladu ka baxday kmg islamarkaana la wiiqay awoodii Al Shabaab.